၈ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသော Amazon HD Fire 8 အသစ်ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် eReaders အားလုံး
Amazon က Fire HD 8 သစ်ကို ၈ လက်မမျက်နှာပြင်နဲ့တရားဝင်ပြသလိုက်ပါတယ်
Joaquín Garcia က | | tablets
ပြီးခဲ့သည့်နာရီများအတွင်းအမေဇုံက၎င်း၏စတိုးဆိုင်များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အားလုံးကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အသစ် HD HD 8။ ဒီတက်ဘလက်က အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော ၈ လက်မမီးသတ်မော်ဒယ် ရှိခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ Alexa လက်ထောက်နှင့်ဆက်သွယ်မှု နှင့်တစ်သက်တာနှင့်အတူကြီးစွာသောဘက်ထရီရှိသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 12 နာရီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်.
ဒီ Fire HD 8 အသစ်ကိုအခုပဲသိမ်းထားနိုင်ပါတယ် စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ စတင်၍ တင်ပို့မည်။ တက်ဘလက်ကို ၀ ယ်တဲ့သူတွေကအခုလုပ်နိုင်တယ် 109 ယူရိုအဘို့အရ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်မှ စတင်၍ ပြုလုပ်သူများသည်ယူရို ၄၀ ထပ်မံပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Fire HD 8 အသစ်သည် Fire စီးရီးများ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပိုမိုရရှိသောတက်ဘလက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
Fire HD 8 အသစ်တွင် ၈ လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်ရှိပြီး 8 x 1.280 pixels ရှိသည်။ ဒီကိရိယာမှာရှိတယ် ၁.၃ Ghz quadcore ပရိုဆက်ဆာသည် ၁.၅ Gb သိုးထည်နှင့်အတူ.
16 နှင့် 32 Gb ram model များရှိသော်လည်း 200 gb အထိတိုးချဲ့နိုင်မည့် microsd ကဒ်များအတွက် slot တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ အနောက်ကင်မရာတွင်2MP အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားပြီးရှေ့ကင်မရာတွင် VGA အာရုံခံစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။ Wifi နှင့် Bluetooth အပြင်၊ Fire HD 8 တွင် 4.750 mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်၊ ၁၂ နာရီအထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိစေမည့်ဒီတက်ဘလက်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ထရီ။
ဒီတက်ဘလက်၏ operating system သည် Fire OS 5.1 ဖြစ်သော်လည်းဤကိစ္စတွင်ဖြစ်နိုင်သမျှမွမ်းမံမှုများရှိလိမ့်မည်။ Alexa နဲ့ဆက်သွယ်မှုအပါအ ၀ င်Amazon ၏ virtual assistant ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တက်ဘလက်ကိုစာဖတ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်သာမကသီချင်းများဝယ်ခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းစသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင် Alexa နှင့်အတူအက်ပ်များမှတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်.
ယေဘုယျအားဖြင့် Fire HD 8 အသစ်သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်ကိရိယာတစ်ခုဟုထင်ရပြီး၎င်းကြီးကျယ်သောဘက်ထရီဖြင့်စာဖတ်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုရရှိစေမည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းကိုဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်တေးဂီတနားထောင်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လာပါ၊ Kobo Aura One အတွက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပုံရသော်လည်းအီလက်ထရောနစ်မှင်ဖန်သားပြင်မရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » tablets » Amazon က Fire HD 8 သစ်ကို ၈ လက်မမျက်နှာပြင်နဲ့တရားဝင်ပြသလိုက်ပါတယ်
ငါထင်သည်ထိုစျေးနှုန်းသည်အလွန်ကောင်းသော option တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ငါက Kobo ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်အနေနဲ့မမြင်ဘူးဆိုရင် ... သူတို့ဟာမတူကွဲပြားတဲ့အရာတွေပါ။
စကားမစပ် Amazon က "ကောင်းမွန်သော" တက်ဘလက်များ၏နယ်ပယ်ကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်ပြီးစျေးပေါတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဟုတ်သလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် HDX နှင့်ကြာမြင့်စွာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအစားထိုးမှုများမှမကြားဖူးပါ။
José Manuel ဟုသူကပြောသည်
ငါ Kobo Aura One ကိုယုံလောက်နီးနီးယုံကြည်လာတဲ့အခါ Amazon ကနေဒီတက်ဘလက်ထွက်လာတယ်။
ငါ Kobo အပေါ်စာဖတ်ခြင်းအရည်အသွေးပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မည်ဟုသို့မဟုတ်ထင်?
José Manuel ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ Kobo aura တ ဦး တည်းကိုရွေးချယ်ရန်နီးပါးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီယခုဤတစ်ခုထွက်လာပြီ။ ငါခန့်မှန်းသည်။ Kobo သည်စာဖတ်ခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လိမ့်မည်မဟုတ်လော?
စောင့်ကြည့်သူများဖန်တီးသူ Alan Moore သည်ရုပ်ပြများကိုမဖန်တီးတော့ပါ
Barnes နှင့် Noble တို့သည် Nook အတွက်ဒေါ်လာ ၇.၉ သန်းအရှုံးပေါ်ခဲ့သည်